Freebase: Ebe ndi mmadu, Ebe ma obu ihe | Martech Zone
Ebe ndabere: Ebe nchekwa data nke ndị mmadụ, ebe ma ọ bụ ihe
Enwere ihe karịrị nde isiokwu 39 na otu ijeri eziokwu Ebe nchekwa, nchekwa data juputara na ndi mmadu ama, ebe, na ihe. Cheedị inwe ike ịnweta ozi site na ajụjụ dị mfe iji Metaweb Query Asụsụ (MQL). Nke ahụ bụ Freebase! Freebase na-etinyekwa ụfọdụ ngwa n'ọrụ - na-ebute isiokwu nke ngwa ọdịnala dị Swipp na-eji ihe iji hazie ma tụọ isiokwu. Pụrụ iche ekele Chris Carfi maka ịkesa teknụzụ m!
Site na Wikipedia: Ebe nchekwa bụ nnukwu ihe ọmụma na-arụkọ ọrụ ọnụ nke mejupụtara nke metadata nke ndị otu obodo mebere. Ọ bụ nchịkọta nke data ahaziri ahaziri nke sitere n'ọtụtụ ụzọ, gụnyere ntinye 'wiki' nke onye ọ bụla. Freebase na-ezube imepụta akụ na ụba ụwa nke na-enye ndị mmadụ ohere (na igwe) iji nweta ozi nkịtị karịa nke ọma. Ọ bụ ụlọ ọrụ sọftụwia ndị America bụ Metaweb mepụtara ya ma na-arụ ọrụ n'ihu ọha kemgbe ọnwa Machị 2007. Google nwetara Metaweb na ire ere nkeonwe kwupụtara na July 16, 2010.
MQL bụ usoro ajụjụ JSON nke nwere ike ịmepụta ụfọdụ nsonaazụ nwere oke:
E nwere oge ụfọdụ, dị ka ndị na-ere ahịa, ebe anyị na-eme nyocha na isiokwu, isiokwu ndị metụtara ya, na ịchọpụta ndị isi na mmekọrịta dị n'etiti ihe. Freebase nwere ike ịba uru maka ụdị ọrụ a. Freebase nwere a aro wijetị -enyere gị aka autosuggest ndị mmadụ ebe ma ọ bụ ihe n'ime gị forms. Dịka ọmụmaatụ, ikekwe ịchọrọ ịhọrọ ụlọ ọrụ n'ime otu obodo, ma ọ bụ ndepụta nke akwụkwọ na isiokwu a kapịrị ọnụ, ma ọ bụ ọbụna ndị ama ama ma ọ bụ ndị na-egwu egwu site na ụdị oru ngo… Freebase nwere ike ịza data ịchọrọ.
Tags: ntọala efugoogle +mmkwemeghe nchekwa data
Teknụzụ maka Salesrụ Ọrụ Na-aga nke Ọma
Ndị na-ere ahịa na Ngwaọrụ Ngwaọrụ: Ọsọ ọsọ, Amamihe, Ọfụma